Google Maps izao dia mamela antsika hamorona sy hizara ireo tranonkala tianay hitsidika | Vaovao IPhone
Google Maps izao dia mamela antsika hamorona sy hizara ireo tranonkala tianay hitsidika
Eny, marina fa ilay fampiharana Ny iOS Maps dia nihatsara be tamin'ny fanavaozana ny iOS farany, fa ny zavatra rehetra tsy maintsy lazaina, misy safidy hafa ary maro no tena mahaliana. Ary mila mandeha amin'ny fifaninanana fotsiny ianao, Tsy misy olona afaka milaza fa ny Google Maps dia rindrambaiko izay tsy mifanaraka amin'ny lehibeRaha ny marina, Google dia manana tahiry lehibe misy toerana, ary tobim-panoratan-tsary lehibe, izany no tsiambaratelon'ny Google Maps.
Raha mpampiasa Google Maps ianao, izaho manokana mifandimby amin'ny iOS Maps sy ny mpitantana ny sari-tanin'ny mpifaninana, Google Maps, dia hanana fomba vaovao hiasa amin'ny fampiharana ianao. Tonga izy ireo Las lisitr'ireo tranonkala kasainao hotsidihina, ary ny tena mahaliana dia ny mizara azy ireo….
Voalohany indrindra, lazao aminao fa raha te hankafy ireo lisitry ny toerana mahaliana ireo dia tsy maintsy apetrakao amin'ny daty misy anao ny Google Maps app. Miaraka aminy sahady hanana ny fahafaha-mamorona lisitry ny toerana ianao ary mizara izany amin'ireo olona tadiavinao. Izao no lazain'ireo tovolahy ao amin'ny Google amintsika:
Anisan'ireo manana lisitra marobe ao an-dohanao ve ianao? Moa ve ianao manokan-tena hanoratra paositra am-polony izay adinonao eraky ny tranonao? Efa nampanantena mailaka miaraka amin'ireo toerana tena tianao efa nalehanao ve ianao ary te hiverina any? Google Maps dia nohavaozina mamela anao hamorona lisitry ny toerana, hizara lisitra amin'ny namanao ary hanaraka ireo lisitra noforonin'ny namanao sy ny fianakavianao. Izany rehetra izany dia tsy miala amin'ny Google Maps ho an'ny iOS.
Tsy mila manao afa-tsy ianao tsindrio ny anaran'ny toerana iray ary omeo bokotra save vaovao. Avy eo azonao atao mamorona lisitry ny tianao indrindra, na mifidiana lisitry ny toerana tianao haleha. Zavatra tena mahaliana rehefa manomana ny dianao ianao, ny zavatra tsara indrindra dia ny fampiasana ny Google Maps dia azonao atao ny manomana ny lalanao mankany amin'ireo toerana ireo.
Google Maps - zotra sy sakafomaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Google Maps izao dia mamela antsika hamorona sy hizara ireo tranonkala tianay hitsidika
Apple Music "hatreto" dia mihoatra ny mpanjifa 20 tapitrisa
Apple, orinasa fahaefatra farany manavao ny chip